Ungasikhetha njani isisombululo sokuThengisa ngokuZenzekelayo | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 15, 2014 NgoMvulo, Novemba 9, 2020 UJenn Lisak Golding
Ngelixa abathengisi banokhetho olunokubakho okwangoku, amanye amashishini ajongana nendawo yokuzenzekelayo ukwenza ubomi kunye nemisebenzi ibe lula. Kwihlabathi elinemijelo emininzi, asinakho ukuphatha yonke into kwaye oko kuthetha ukuba imisebenzi elula yolawulo eyakhe yanika i-20% yosuku lwethu.
Umzekelo ophambili welinye lamashishini athabatha ukuxhuma okukhulu kwisithuba esizisebenzelayo kungaphakathi kwintengiso; Ngokucacileyo, iSalesforce.com ibingumdlali omkhulu ixesha elide, kodwa ezinye izicelo, ngaphandle kweeCRMs, ziya kukhanya kwaye zizama ukuba zizisombululo ze-SaaS kwiqela lokuthengisa. Injongo yezi zisombululo ayisiyiyo eyokuzenzela imisebenzi yolawulo kuphela, kodwa ziyilelwe ukuba zikubonelele ngengqolowa entle kubahlalutyi ezinokubonelela intengiso yeshishini lobukrelekrele (SBI) kwi:
Xa ithemba lalibandakanyekile.
Ngawaphi amaqhinga kunye ne-cadence ekufuneka isetyenziselwe ukufezekisa iziphumo ezilungileyo.
Umxhasi wethu kunye nomxhasi, uSalesvue, wayengomnye woovulindlela kwindawo yokuthengisa oomatshini, kwaye baye baqhubeka nokunceda abathengi babo ukuba benze amaqela abo okuthengisa avelise ngakumbi. Ukusuka kwimisebenzi yolawulo ukuya kwizikhumbuzo, isoftware yabo yenza ukuba kube lula kumaqela athengisayo ukuba ajolise ekuthengiseni kunokuba agcwalise iiCRM zawo.
Njengenye yezisombululo zokuqala zokuthengisa ezizenzekelayo, baphuhlise i-infographic on Ungasikhetha njani isisombululo sokuThengisa, Ukubonelela ngoluhlu oluneenkcukacha lwezinto ekufuneka ziqwalaselwe xa uzama ukufumana isisombululo se-SaaS esifanelekileyo kwiqela lakho.
Ngaba okwangoku usebenzisa isisombululo esizisebenzelayo? Ukuba kunjalo, yeyiphi? Yabelana ngeengcinga zakho okanye ngamava akho kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi. Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi ngeSalesvue, cofa apha ngezantsi:
tags: UkuThengiswa kweMpahlaubukrelekrele babathengiAmanani entengisooomatshini bokuthengisaintengiso yeshishini lobukrelekreleumxholo wentengisoUkunika amandla ukuthengisaintengiso ye-infographicintengiso infographicsI-SBI
Jul 15, 2014 ngo-10: 03 AM
I-inforgraphic enkulu-khange ndiqonde ukuba intengiso yangaphakathi inyuke njani!